Ikhaya noLusapho | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ekhaya noSapho
Yintoni enokumnika indoda ngoFebruwari 23?
Umkhuseli woSuku lweLizwe loobawo kwilizwe lethu ngokungaguqukiyo ujike waba luSuku lwaMadoda. Sisebenzisa u-23 kaFebruwari ukunika izipho ezintle emadodeni, nokuba kwenzeka ntoni na emkhosini. KUNYE…
Inkcazo ye-parrot kunye nabanye
Abantu abaninzi bagcina izilwanyana ezahlukileyo ekhaya. I-budgerigar iqhelekile. Inkcazo yabantwana ichazwe ngokweenkcukacha, kunye neefoto ukucacisa ngokucacileyo ukuba luhlobo luni lweentaka. Ukuyigcina ekhaya kubalulekile ukuba uyazi ...
Ukugcoba kwitheko lomdibaniso-unyaniseke kakhulu ngamazwi akho
Yintoni i-toast kwiqela elidibeneyo? Ukuthetha ngamazwi akhe, ngamanye amaxesha kujika kube ngumboniso wenene. Intetho kufuneka ilungiselelwe kwangaphambili. Ukukwazi ukuthetha amagama ambalwa kwimakrofoni esidlangalaleni, phakathi koogxa ...
I-Bacteriuria ngexesha lokukhulelwa: iimpawu, unyango
Ngexesha lokumitha, umama okhulelweyo unomdla ngakumbi kwimpilo yakhe. Nangona kunjalo, oku akunako ukusindisa isini esifanelekileyo kwizifo ezahlukeneyo kunye nezifo. Rhoqo, oomama abakhulelweyo bajongene ...
Isiteketiso senzantya yenja (inkwenkwe nentombazana)
Uninzi lwabantu, ngaphambi kokufumana inja, luza namagama kwangaphambili, zama ukuqikelela isimilo. Kwaye kwangaxeshanye, wonke umntu ufuna ukunika isilwanyana isilwanyana sokuqala kunye nesingalibalekiyo. Igama lesidlaliso elipholileyo lenja ngu ...
Amachibi adibene neebhola: inkcazo kunye neenzuzo. Indlela yokwenza ibhola elomileyo?
Zininzi izinto zolonwabo kubantwana kweli xesha lethu. Kule nqaku, uya kwaziswa ngamachibi ebhola omileyo. Uya kufumanisa ukuba zeziphi izibonelelo ezilolu hlobo lokudlala. Fumana ukuba ingakanani ...
Iqela eliphakathi lokufundela. Iiklasi kwiqela eliphakathi
Iqela eliphakathi enkulisa lizinyaswa ngabantwana abaneminyaka emine ubudala. Abafundi abanjalo bayabuqonda ubudlelwane obukhoyo phakathi kwezifundo. Ngomsebenzi, bazama ukubonisa izenzo zabantu abadala. Xa kuvela iimeko ezinzima, abantwana ngokuzimeleyo bazama ...
"UFeliks" (ukutya kweekati): uphononongo lwabathengi kunye noogqirha bezilwanyana
Uninzi lwabanini bezilwanyana ezinoboya bakhetha ukondla iikati zabo, iikati kunye neekati ngokutya okulungele ukutyiwa. Namhlanje kwimarike yaseRussia kukho iimveliso ezininzi ezivela kubavelisi abohlukeneyo, kwaye enye yazo yikati ...
Umatshini wokuhlanza inja: ukhetho, ukuthenga, ukulungisa, ukuqinisa, amaxabiso kunye nokuhlaziywa kwabanikazi. Ukususela kwizakhono ukuya kwizinto ezincinci kunye neencwadana ezikhombisayo
Ukuba unenja yolu hlobo efuna ukulungiswa rhoqo, uya kufuna isicoca esikhethekileyo. Nokuba isilwanyana sakho silundwendwe kwindawo yokwenza ekhethekileyo, oko kukuthi ...
Broad Maslenitsa. Ukubhiyozela iShrovetide
I-Maslenitsa ebanzi, iKrivosheyka, iPancake, iObyedukha, iMaslenaya iveki yenye kunye neholide efanayo ebhiyozelwa phantse kwihlabathi liphela. Intsingiselo yale holide kukwahlula phakathi kobusika nentwasahlobo ...
Unokuhlamba njani inkwenkwana? Kangaphi ukuhlamba le nkwenkwana
Abazali bahlala bexhalabile malunga nokuphunyezwa ngokuchanekileyo kweenkqubo zococeko, kubandakanya ukuhlamba, ukuhlamba nokunyanga amalungu omzimba angaphandle osana olusanda kuzalwa ngomgubo, iikhrim okanye iioyile. Ulusu lomntwana lubuthathaka kakhulu, xa kungekho kufanelekileyo ...
Croup kumntwana. Iimpawu kunye nokunyangwa kwe-croup kubantwana
Isifo sephepha lokuphefumla, esikhokelela kwi-stenosis ye-larynx, kwinzululwazi yezonyango ibizwa ngokuba yi-croup. Esi sifo sikhatshwa zezi mpawu zilandelayo: ukuphefumla okunengxolo, ukungxola, ukukhwehlela "ukukhonkotha", ukuphefumla kancinci. Croup yomntwana - ...
Igama leqela labantwana abancinci - ungakhetha njani?
Igama leqela le-kindergarten libaluleke kakhulu. Inomdla ngakumbi kubantu abadala nakubantwana xa endaweni yesiqhelo "seqela elincinci" okanye "iqela elinguNombolo 2" ezinye izandi zamagama ezinomdla. Emva koko umntu ngamnye uyavela. Yiza ne ...
Kutheni ufuna isitampu? Izinja zichazwe ngokuchonga. Bazenza njani?
Le ndlela yokuchonga izilwanyana sele isetyenzisiwe kwizilwanyana zasekhaya kwezolimo nakwizilwanyana zasekhaya, nakwizilwanyana zasendle. Elokugqibela lenza ubuqhetseba obunjalo ukuze kufundwe ukufuduka. Kwezolimo, baphawula ...
I-terrier ye-toy ekhwankqisayo: inkcazo yokuzala, ukunakekelwa nokugcinwa
Itreyini yokudlala eneenwele egudileyo incinci ngobukhulu. Kodwa ngummeli opheleleyo wohlobo lwakhe. Akukho nzima ukuyigcina le nja, kuba into yokudlala incinci, inobunzima ngokomndilili we-2 kg, engaphantsi ...
Kutheni iikati ezizalwe ngamehlo ahlukileyo?
Kudala kukholelwa ukuba iikati ezinamehlo ahlukeneyo zizisa ithamsanqa kubanini bazo. Izazinzulu ziye zaxoxa kangangeminyaka malunga nokuba ungantoni lo mbono wahlukileyo kwaye ngamanye amaxesha woyikisayo. Abanye baphikisana ...
Som synodontis: iintlobo, inkcazo kunye nomxholo
Ama-aquarists e-Novice ahlala ejongene neengxaki ezininzi. Emazantsi e-aquarium ngokukhawuleza kugqunyelelwe ngothuli, amanzi ajika abe luhlaza, iintlanzi ezibizayo ziyagula zife. Awunakho ukwenza ngaphandle kwengcebiso yeengcali apha. Kwaye enye yazo ...
Inja yaseNtaliyane isiGreyhound: inkcazo yohlobo (isithombe)
Inja eyingwevu yase-Italiyane isilwanyana esincinci, esihle nesithandekayo esinobuntu obuhle kwaye sihlala kakuhle nabantwana, kwaneentsana. Izilwanyana zinentloni, ke impendulo ekhawulezileyo iya kulandela kwizenzo ezingalindelekanga. Ingwevu yesiTaliyane ...
Izixhobo ezingezizo zesintu zemfundo yezemvelo ebantwaneni. Impilo evuyayo yempilo
Umsebenzi womzimba wakhe wonke umntu kufuneka ubekhona ebomini ngokuchanekileyo ukuya kuthi ga apho kuyimfuneko ukuba umzimba ugcine imeko esempilweni kunye nemilo. Ixesha lokufunda ngokwasemzimbeni ...
Page 1 Page 2 ... Page 47 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,889.